Ungayisebenzisa Kanjani Ividiyo Ukumaketha Ibhizinisi Lakho Elincane Lokuthengisa Izakhiwo | Martech Zone
Uyazi ukubaluleka kokumakethwa kwevidiyo ngobukhona be-inthanethi bakho ibhizinisi lezindawo zokuhlala?
Akunandaba ukuthi ungumthengi noma umthengisi, udinga umazisi womkhiqizo othembekile nodumile ukuheha amaklayenti. Ngenxa yalokhu, umncintiswano wokumaketha kwezezakhiwo unolaka kangangokuba awukwazi ukukhulisa kalula ibhizinisi lakho elincane.
Ngenhlanhla, ukumaketha kwedijithali kunikeze amabhizinisi abo bonke osayizi ngezinto eziningi eziwusizo ukukhulisa ukuqwashisa ngomkhiqizo. Ukumakethwa kwevidiyo kuyisu elibalulekile ekumaketheni kwedijithali futhi kuyasiza kuzo zonke izimboni, ikakhulukazi izindlu nomhlaba.
Uma ufuna ukufunda ukumaketha kwevidiyo amathiphu asebenziseka kalula ukukhulisa ibhizinisi lakho elincane lezindlu, qhubeka ufunde le ndatshana.
Nquma Izinhloso Zakho Futhi Hlela Uhlelo Ngokufanele
Okokuqala, udinga ukwazi ukuthi awukwazi ukuqala ukwenza amavidiyo ngaphandle kwezinhloso nezinhlelo. Ukumakethwa kwevidiyo kungumsebenzi obiza kakhulu futhi odinga isikhathi futhi kudinga isu eliphelele nelinembile.
Ngaphambi kokuqala ukumaketha ngevidiyo, zinike isikhathi sokunquma izinhloso zakho bese wenza isu lokuyifinyelela. Udinga ukwazi ukuthi yini ngempela ofuna ukuyifinyelela nokuthi ungafinyelela nini kwimiphumela oyifunayo.
Nazi ezinye izinhloso ezijwayelekile ongazicabangela:
Inani lokubukwa kwamavidiyo akho ngenyanga
Ukuqonda ukufutheka okufanele kwalokhu, kungahle kudingeke wenze usesho lomncintiswano ukuthola imiphumela yabancintisana nawe bezindlu.
Lapho unquma izinhloso zakho, ungahlela uhlelo ngokufanele. Zama ukwakha isu eliqinile futhi unamathele kulo. Vele, njengoba usaqala, ungadinga ukubuyekezwa ngezigaba eziphakathi.
Beka eceleni Isabelomali Esingokoqobo
Isinyathelo esilandelayo ukulinganisa inani lemali olidingayo ukuze usebenzise ingcebo yakho isu lokukhangisa ngevidiyo.
Lesi sinyathelo siyadingeka ukuze uqiniseke ngekhwalithi yamavidiyo akho. Khumbula ukuthi ukudala amavidiyo akhangayo kudinga amathuluzi amaningi, futhi ngemuva kwalokho, kufanele ubeke eceleni isabelomali esanele.
Awudingi ukuphoxeka uma ungakwazi ukukhokhela isabelomali esikhulu; ungaqala ngamavidiyo enziwe ekhaya nesoftware yokuhlela ividiyo yamahhala.
Zama ukufunda amathiphu we-DIY wokwenza amavidiyo ukunciphisa izindleko. Kancane kancane ungahambela amathuluzi we-premium namavidiyo asebenza kangcono ebhizinisini lakho.
Chaza isitayela esihlukile
Kunconywa kakhulu ukuthi ube nesitayela esihlukile ekumaketheni kwakho kwedijithali, ikakhulukazi kumavidiyo akho. Ukungaguquguquki kulesi sitayela kusiza izithameli zakho zikubone ngemuva kwesikhashana.
Isitayela sakho, kufaka phakathi imibala, ithoni yezwi, uhlobo lokuxoxa izindaba, njll., Limelela uphawu lomkhiqizo wakho. Zama ukuchaza okuthile okupholile ukuheha izilaleli zakho. Ungathola nempendulo evela kuzithameli zakho ukuze uthuthukise isitayela sakho sevidiyo.
Ungachaza futhi itimu yokuphakelayo kokuthunyelwe kwakho kwemidiya yezenhlalo. Kusho ukuthi lapho isivakashi sibona okuphakelayo kwakho, okuthunyelwe kunengqikithi ephelele. Le yindlela enhle yokubamba izethameli ekuvakasheni kokuqala. Isibonelo, ungabona itimu yokuphakelayo elandelayo ku-Instagram:
Njengoba ukwazi ukubona, okuthunyelwe kwenza isitayela jikelele ndawonye. Ungenza ngezifiso izingqikithi ezahlukahlukene zokumakethwa kwamavidiyo wakho wempahla.
Hlaziya amavidiyo akho e-Real Estate
Kufakazelwe ukuthi lapho ukhuluma nobungane bakho nezethameli zakho, uthola amazinga aphezulu okuzibandakanya.
Lokhu kubaluleke kakhulu uma kuziwa ekuthengeni nase ukuthengisa ama-condos noma amafulethi. Ukuba nekhaya kungenye yezinto ezinhle kakhulu zomuntu siqu ezibandakanya imizwelo nokuziphatha okuthakazelisayo.
Ngakho-ke udinga ukufaka le mizwa kumavidiyo akho bese uxoxa izindaba zakho ucubungula zonke izinkinga zezithameli zakho.
Isibonelo, zama ukuzwelana nezethameli maqondana namanani aphezulu nokwehla kwamandla emali. Kalula nje, kufanele wenze amavidiyo akho e-estate abe ngabantu ukwenza izivakashi zikholelwe ukuthi ucabanga njengazo.
Khetha Izingxenyekazi Ezilungile Zokumakethwa Kwevidiyo
Kumele wazi ukuthi isiteshi ngasinye sedijithali sinababukeli baso, ngakho-ke kufanele wabelane ngamavidiyo akho kuzingxenyekazi ezifanele ukuthengiswa kwezindlu.
Isibonelo, i-LinkedIn iyisiteshi senhlalo esenzelwe umsebenzi, futhi ochwepheshe abaningi bezezakhiwo banama-akhawunti kubo. Ngenxa yalokho, kuhle ukuthi wabelane ngamavidiyo akho kule nkundla.
Amapulatifomu aphezulu ezokuxhumana nabantu njengo-Facebook, Instagram, ne-Twitter abalulekile ekumaketheni kwevidiyo yakho. Isibonelo, i-Instagram inezici eziningi eziwusizo zokumakethwa kwamavidiyo njengokuthunyelwe kokuphakelayo, izindaba, amavidiyo abukhoma, IGTV, namaReels. Kufanele uzuze kakhulu kulezi zici ukuthola ukuvezwa okuphezulu okungenzeka.
Hlela amavidiyo wakho we-Real Estate
Amavidiyo anesibopho sephesenti elikhulu lomthamo womphakathi. Amaningi ala mavidiyo enziwe ngemikhiqizo, ngakho-ke kubalulekile ukuthi uhambe phambili kulabo oqhudelana nabo.
Abasebenzisi bahlaselwa inani elikhulu lamavidiyo, futhi ithuba lakho lokutholakala liphansi kakhulu. Enye indlela yokwandisa ukubonakala kwakho nokubeka amavidiyo akho emehlweni wabasebenzisi abaningi ukuhlela.
Inani eliphakeme lamahora aku-inthanethi iningi labantu abasebenzisa izinkundla zokuxhumana liyahlukahluka ngokwesikhulumi nangomkhakha. Isibonelo, isikhathi esihle sokuthumela ku-Instagram sihlukile ku-Twitter.
Ngakho-ke kungcono usebenzise amathuluzi wokuhlela ezokuxhumana nabantu ukuze uthumele ngesikhathi esihle somkhakha wakho futhi uthole amazinga aphezulu okuzibandakanya wamavidiyo akho.
Nasi isibonelo sokuhlela ukusebenzisa Ukuqubuka komlilo:
Sebenzisa Amandla Obufakazi
Idumela lomkhiqizo kuyisihluthulelo sokukhuthaza amathuba okuba amakhasimende akho. Indlela ewusizo yokwenza lokho ngokuvumela amakhasimende wangaphambilini ukuthi akhulume egameni lakho. Ubufakazi bubalulekile ebhizinisini elincane ngoba liletha ukwethenjwa futhi lenza amathemba amasha azizwe ekhululekile.
Uma amakhasimende akho eba ngabaninikhaya abajabulayo, kungenzeka bakhulume kakhulu ngomkhiqizo wakho. Udinga ukugcina uxhumekile nabo futhi ushukumise nomkhankaso wakho wobufakazi. Zama ukubeka amavidiyo wabo obufakazi ekhasini eliyisiqalo lewebhusayithi yakho ukubazisa ukuthi imibono yabo ibalulekile.
Nasi isibonelo sobufakazi obuhle obuvela ku-YouTube:
Lungiselela ubude bamavidiyo akho
Ngisho nobude bamavidiyo akho bungaba nomthelela omkhulu ku-ROI wokumaketha kwevidiyo yakho yezezakhiwo. Kukonke, abasebenzisi bezenhlalo bathanda amavidiyo amafushane futhi amnandi. Kungakho izici zamavidiyo amafushane njenge-Reels noma i-TikTok zikhuphuka.
Vele, ubude bevidiyo obulungile buxhomeke embonini yakho nakwipulatifomu owabelana ngayo. Okokuqala, ungacabanga ngamavidiyo wemizuzu engu-2 ngosayizi wakho wevidiyo.
Futhi, ungadala amavidiyo amade wezingxenyekazi ezifana ne-Youtube ne-IGTV bese wabelana ngezinguqulo ezifinyeziwe zalawo mavidiyo kwamanye amapulatifomu. Ngale ndlela, ungakhuthaza izethameli zakho ukuthi zihlole iphrofayili yakho kwamanye amapulatifomu.
Hlaziya Ukusebenza Kwakho Kokumaketha Kwevidiyo Yakho
Khumbula ukuthi alikho isu elihlala liphelele unomphela. Njengebhizinisi elincane lezezakhiwo eliqala ukukhangisa kwevidiyo, ungahle udinge ukubuyekeza isu lakho njalo lapho kwenzeka.
Zama ukuhlaziya ukusebenza kwakho bese uthola ubuthakathaka namandla akho. Uma ubona amavidiyo ahamba phambili futhi enza kabi kakhulu, ungalungiselela amavidiyo akho wangakusasa futhi uthole i-ROI ephezulu.
Nasi isibonelo samathuluzi wokuhlaziya ku-Twitter:
Qalisa ukuhlolwa kwe-A / B
Akunandaba ukuthi ulunge kangakanani ekwakheni amavidiyo, udinga ukwazi ukuthi hlobo luni lwevidiyo, amazwibela, i-hashtag, nezinye izinto eziningi ezikhanga izethameli zakho. Ukuhlolwa kwe-A / B kuyindlela ewusizo yokuqonda ukusabela kwezithameli zakho ezintweni ezahlukahlukene kokuthunyelwe kwakho kwemidiya yezenhlalo / iwebhusayithi.
Isibonelo, ungashintsha i-hashtag yakho yevidiyo ethile bese uthumela zombili izinhlobo ukulandela ukusabela kwabalandeli bakho bezenhlalo kubo. Lokhu kufakazelwe ukuthi kuyindlela enhle yokwandisa okuthunyelwe kwakho ngokuya ngentshisekelo yezithameli zakho.
Ukudalula: Martech Zone ifake isixhumanisi sokusebenzisana se- Ukuqubuka komlilo.
Tags: ukuhlolwaigama lomkhiqizoukuvutha komliloamavidiyo wobufakazi bamakhasimendeubufakazi bamakhasimendehashtagukuthengisa izindluukumakethwa kwezindluubufakazi bokuthengiswa kwezindluividiyo ye-real estateividiyo ye-realtoramavidiyo wobufakaziama-analytics e-twitteramazwibela wevidiyoubude bevidiyoukukhangisa kwevidiyo
I-CrankWheel: Ukuhlela i-Bypass nokulanda Nge-Demos Esuselwe Esipheqululini Esisheshayo